Fotodrafitrasa maharitra : Hoentina hanatsarana ny fiainam-bahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaFotodrafitrasa maharitra : Hoentina hanatsarana ny fiainam-bahoaka
Fotodrafitrasa maro no efa vitan’ny fitondram-panjakana nandritra ny enim-bolana voalohan’ity taona ity, maika avokoa ny asa hoy ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ny sehatra maro samihafa ary hovitaina avokoa izany. Raha nitanisa ny fotodrafitrasa efa vita ny Filoha dia nilaza fa “tsy ireo ihany no natao, fa fototra hiaingana ahazoana fampandrosoana eto amin’ ny firenena ireo’’. Lalana, sekoly, angovo,hopitaly fambolena ary ny fotodrafitrasa toa ny seranan-tsambo sy fiaramanidina no anisan’ny notanterahina, ary nisy ny efa vita sy efa azo ampiasaina ihany koa amin’ireo asa ireo, izay rehetra vita ihany koa dia natao hanamorana ny fiainan’ny vahoaka. Anisan’ny notanisain’ny Filoham-pirenena tamin’ ireo asa vita ireo ohatra ny asa izay notakonana farany teo dia ny tetezan’ny kamoro mampitohy an’Antananarivo sy Mahajanga izay mirefy 265 metatra , ary azo nampiasaina ny voalohan’ny volana jolay lasa teo. Ankoatra ny tetezan’ny kamoro io dia teo ihany koa ny fahavitan’ny tetezan’i Pomay izay any amin’ny lalam-pirenena faha-35 izay mampitohy an’ Antsirabe hatrany Morondava, miara-dalana amin’izany ihany koa ny efa fahavitan’ny lalana mirefy 165 kilometatra izay nahafa po ny Toliara sy Analamboasamby. Mikasika ny fanamboaran-dalana izay ihany, dia ny fahavitan’ny lalana any Atsimo andrefana ho tara io izay any amin’ny lalam-pirenena faha-5 izay mirefy 105 kilometra mampitohy an’i Toliara sy Morombe, miampy ny tetezan’ i Befandriana . Ankoatra ireo asa vita voatanisa ireo dia teo ihany koa ny zava-bita tao Toliara izay nahavita tsena goavana ary eo ihany koa ny fampidirana rano fisotro madio sy ny lalana ao an-tampon-tanànan’i Toliara izay mitentina 980 tapitrisa ar no teti-bidin’izay asa sosialy izay.
Ankoatra ny tany Toliara izay dia teo ihany koa ny tany Mahajanga dia ny fanamboarana ny lalana tao an-tampon-tanàna izay mirefy 4 km ao Tsararano sy Ambalavolo , ary efa nampanantenain’ny filoha ihany koa ny fanamboarana manontolo ny lalam-pirenena faha-4 mampitohy an’Antananarivo sy Mahajanga. Tsy nohadinoin’ny filoha ihany koa ny fitsinjovana ireo mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo ao Mahajanga ka nahavitan’ny lalana mihazo io oniversite io. Ankoatra izay dia vita vao haingana ihany koa ny tetezana izay hipetrahan’ny lalam-by mampitohy an’i Sanjavavy sy Lorendava ao amin’ny distrikan’i Brickavile, ary volan’ny fanjakana malagasy madiodio no nahafahana manatanteraka izany izay nitentina 2 miliara Ariary. Nambaran’ny filoha tamin’ izany fa “azo atao tsara ny manatanteraka asa rehefa ilain’ny vahoaka maika izany, ity fotodrafitrasa ity izao dia roa volana monja no nanatanterahana azy’’. Ankoatra ireo notanisaina ireo dia efa hiarahan’ny rehetra mahafantatra ihany koa ny fanavaozana hanaraka ny fenitra sy ho moderina ny seranam-piaramanidina roa, dia ny etsy Ivato izay afaka handray olona hatrany amin’ny 1,5 tapitrisa isan-taona sy Nosy be , tanjona amin’ izao asa izao hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny “hampitombo sy hanatsara ny toe-karena amin’ny fizahan-tany no tanjona amin’ izao ary eo ihany koa ny tolotr’asa izay efa mandeha amin’ izao’’.
Mikasika ny fambolena indray kosa dia « maro ny ezaka izay efa vitan’ny fitondram-panjakana ary efa anatin’ny ezaka fanatsarana sy fampitomboana ny voka-bary isika izao, ary efa natomboka tamin’ny enim-bolana voalohany ihany koa ny dingana faharoa amin’ny fanajariana ny lemak’i bas mangoky any Atsimo andrefana . Io izay 5 arivo ka hatramin’ny 1 alina hekitara ny velaran-tany, tafakatra 5 taonina isaka ny hekitara kosa ny vokatra amin’izany’’ hoy hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina . Fa tsy diso anjara amin’ izay ezaka tanterahina izay ihany koa ny ao Tanambe sy Amparafaravola , satria nohavaozina ny lakandrano sy ny velaran-tany 5 arivo hekitara , ary teo ihany koa ny fampidirana rano fisotro madio. Eo amin’ izay fanatsarana ny voka-bary izay ihany dia notsiahivin’ny filoha ihany koa ny fifanarahana vita sonia tamin’ny indianina izay nahazoana vola 2 tapitrisa Dolara. Izany dia hanamboarana ireo trakitera simba izay efa nomen’izy ireo teo aloha, ary eo ihany koa ny fananganana orinasa famokarana zezika izay hamokatra karan-jezika biolojika miisa 4.
Fa anisan’ny fotodrafitrasa efa vitan’ny fanjakana foibe ihany koa ny fahavitan’ny fanamboarana ny lapan’ny tanàna ao Sambava izay mitentina 520 tapitrisa Ariary, ary volan’ny fanjakana madiodio ihany koa no nanamboarana izany. Eo amin’ izay fotodrafitrasa izay ihany koa dia nambaran’ny filoham-pirenena ny efa fanombohan’ny fanamboarana sy fanaovazana ny toby miaramila manerana an’i Madagasikara izay efa natomboka tao amin’ny CAPSAT izany. Tsy hohadinoina ny trano fanofanana tanora any Ambositra, ny hopitaly natokana hitsaboana ny reny sy ny zaza toa ny tao Antsiranana ary hatrany amin’ny faritra hafa . tao anatin’ izay enim-bolana voalohany izany ihany koa no nahafahana nahavita ireo CSB miisa 45 izay nohavaozina amin’ ireo 12, enina kosa ireo hopitaly vita any amin’ny distrika ary ny 15 dia nohavaozina ary efa an-dalavam-pahavitana. Hopitaly amin’ny distrika 9 kosa izay nasiana toeram-pandidiana ary 10 amin’ ireo hopitaly oniversitera 22 dia nasiam-panatsarana, nomarihan’ny filoha moa fa ao anatin’ny roa volana no hahavitan’ ireo asa ireo.
Mikasika indray kosa ny fanamboarana ireo sekoly izay ho an’ny zana-bahoaka dia anisan’ny efa vita izao ny EPP Ambodimita sy ny etsy Andrefanambohijanahary, manampy izany ihany koa ny trano famakiam-boky etsy Antanimbarinandriana. Nandritra izay enim-bolana voalohany izay ihany dia efitrano fianarana miisa 615 no nahorina hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina ary 501 kosa nohavazina . Nambaran’ny filoham-pirenena fa “fotodrafitrasa fototra sy maharitra no hatsangana fa tsy vonjy tavan’andro akory, ampahany ihany ireo tetikasa tsy maintsy atao ary manao dingana ny fanjakana . Manoloana ireo asa vita ireo dia nanentana ny sehatra tsy miankina ihany koa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina “entanina ny sehatra tsy miankina hanao izay azo atao satria araka ny fanazavana nandritra ny fihaonana notanterahina niaraka amin’izy ireo tany Mahajanga, dia tsy maintsy ampitomboina ny tahan’ny harinkarena faobe mba hitsinjarana araka ny tokony ho izy ny harem-pirenena izay an’ny vahoaka ‘’hoy hatrany ny filoha. Nitondra fanazavana mikasika izay ihany ny filoha ‘’raha ny tarehimarika dia 10 miliara Dolara eo ho eo ny lalan’ny harikarem-pirenen-tsika. 3,1 isan-jato ny fitombon’ny harikarena ny taona 2014, 4,1 isan-jato kosa tamin’ny 2016 ary vinavinaina ho tafakatra 4,5 isan-jato izany amin’ ity taona ity marihana fa 6 ka hatramin’ny 7 isan-jato no tanjona . Raha misy fampiasam-bola 400 tapitrisa Dolara dia manome tahan’ny 1 isan-jato amin’ny fitombon’ny tahan’ny fiakaran’ny harikarena izany. Raha tantanteraka avokoa famatsiam-bola tamin’ny fivoriana notanterahina tamin’ ireo mpamatsy vola na ny CBI tany Paris izay ampiasaina mandritra ny efa-taona , io izay hitsinjara eo amin’ny 2,5 milliara dolara isan-taona , dia ho tafakatra tsy ho ela ary ho tratra ny tanjona 6 na 7 isan-jato ‘’ hoy hatrany ny fanazavan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ankoatra ireo moa dia anisan’ny nomarihan’ny filoha ihany koa ny fanamboarana ny seranan-tsambon’ i Toamasina izay ny firenena japonais no hamatsy vola amin’ izany
FJKM Imerinkiasinina : Nitsondrano an-dRavalomanana mivady
Nihazo an’Imerinkiasinina ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, sy ny vady aman-janany omaly. Tamin’izany indrindra no nanatrehan’izy ireo ny fotoam-pivavahana tao amin’ny FJKM Imerinkiasinina. Araka izany, ankoatra ny fotoam-pivavahana notarihin’ny ray aman-dreny mpitandrina, ny pastora ...Tohiny